Akụkọ - Mpụta mbụ na nnyefe nke igwe mgbama ọkụ nke ụwa.
Ọkụ ọkụ ọkụ LED
Ụlọ ahịa Smart
Ụlọ ọrụ Smart
Okporo Ụzọ Smart
Mmepụta mbụ nke ụwa na nnyefe nke mgbama mgbama mgbama.
Na Julaị 22, 2021, RED100 Beacon smart bulbs bụ nke emepụtara nke ọma, ewegakwara Tuya nke mbụ nke Beacon smart bulb samples. Emere emume nnyefe nlele na RED100. Lin Tianzhun, onye isi njikwa Tuya Smart East China, nabatara akpa nlele mbụ n'aha Tuya Smart.
Lin Tianjun, onye isi njikwa Tuya Smart East China (n'aka ekpe), Lin Limin, onye isi njikwa RED100 Lighting (n'aka nri)
Dịka onye ibe mbụ nke ngwọta ọkụ ọkụ Tuya Beacon smart, RED100 bidoro Beacon Smart Bulb na July 6nke, Bọbụ bọmbụ smart dabara maka ụdị ihe nkiri ọkụ ụlọ dị n'ime na n'èzí, yana ọnụ ahịa ya dị ọnụ ala, uru dị mfe ijikọ, ọ nwetala nkwado ndị ahịa n'ụwa niile.
RED100, dị ka onye atụmatụ atụmatụ na Tuya Smart, etolitela usoro 50 nke ngwaahịa ejikọtara site na iji ikuku ikuku dị iche iche, gụnyere Wi-Fi Combo, BLE Mesh, BLE, na Zigbee. Ngwaahịa ọkụ ha eregoro North America, Europe, South America, Southeast Asia na mpaghara ndị ọzọ. Ndị otu abụọ ga -aga n'ihu na -arụkọ ọrụ ọnụ n'ahịa na ngwaahịa, wee gwuo ala n'ime ebe ọdịda na ohere ahịa nke ọkụ ọkụ na ahịa ụwa.
Ndị ahịa ọ bụla nwere mmasị na bọlbụ mgbama a, pls. kpọtụrụ onye na -ere ahịa mpaghara mpaghara site na Red 100, a ga -aza arịrịọ nlele ọ bụla n'ime izu 1. Biko ziga email na info@red100.com.cn ma ọ bụ kpọọ 86-512- 53119122.
Banyere RED100 Igwe ọkụ
RED100 Lighting bụ onye nrụpụta ọkụ na -ejikọ ụwa ọnụ zuru ụwa ọnụ dabere na China
E hiwere RED100 na 1995. Ugbu a, o guzobela ụlọ nrụpụta abụọ, n'otu n'otu na Suzhou na Yantai ma were ndị ọrụ karịrị 1,200.
RED100 lekwasịrị anya n'ịmepụta, nyocha na ịzụlite, imepụta na ire ngwaahịa ọkụ maka afọ 26. Ka ọ dị ugbu a, RED 100 nwere ikikere teknụzụ igodo 93, ụlọ nyocha pụrụ iche nke gafere asambodo TUV nke German, asambodo Switzerland SGS, na asambodo UL America. Ọ bụkwa otu n'ime ụlọ ọrụ maka ịtọlite ​​ọkọlọtọ ọkụ ọkụ ọkụ na China, a na -ebuga ngwaahịa na mba 60. RED100 bụ ọkachamara na -emepụta isi iyi ọkụ na -elekwasị anya na ngwaahịa ọkụ ọkụ.
Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na:
Igwe ọkụ ọkụ RED100 Weebụsaịtị, Njikọ, Facebook, Twitter, YouTube.